Akụkọ - Kedu ụdị mmepe nke granulator akọrọ ga -enwe n'ọdịnihu?
Kedu ụdị mmepe nke granulator akọrọ ga -enwe n'ọdịnihu?
Ihe akọrọ granulator bụ usoro izizi ọhụụ ewepụtara ka emechara ka “usoro izizi otu ụzọ” nke usoro mkpofu nke ọgbọ nke abụọ. Ọ bụ usoro mmachi gburugburu ebe obibi na akụrụngwa ọhụrụ maka ịpị ntụ ntụ ozugbo n'ime nsogbu. A na -ejikarị granulator akọrọ na ọgwụ, nri, kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ọkachasị dabara adaba maka ịkwanye ihe ndị dị mfe irekasị ma ọ bụ ịgbanye ọkụ mgbe mmiri na -ekpo ọkụ. Enwere ike ịpịpị mkpụrụ osisi nke granulator akọrọ n'ime mbadamba ma ọ bụ jupụta na capsules.
N'ime usoro ọgwụgwọ China na Western, granulator na -arụ ọrụ dị oke mkpa. Site na mmepe na -aga n'ihu n'ahịa ahịa ọgwụ, atụmanya na ihe ndị mmadụ chọrọ maka ụlọ ọrụ ọgwụ dịkwa elu ma dị elu. Ọ bụrụ na granulator chọrọ inwe mmepe ka mma n'ọdịnihu, ọ ga -aga n'ihu na -emepụta ngwaahịa ọhụrụ na mgbanwe ahịa.
N'ọdịnihu, ọ ga -emezu ihe ndị a chọrọ maka ịdị ọcha yana mgbanwe ọrụ. Nke mbụ, sistemụ mkpochapu akpọchiri emechi nwere ike belata mmetọ uzuzu na usoro mmepụta, iji belata mmetọ na ihe egwu nke mmetọ; Nke abuo, akụrụngwa na -ewepụta ụdịdị modular, enwere ike iji ngwaọrụ ole na ole kpochapụ ngwaọrụ niile, nke dabara adaba maka ihicha nkeji modulu niile, na ị nwere ike dochie ihe nkedo na ihe nrụpụta ka ọ dị mfe imeghari maka ọrụ granulating dị iche iche.
Oge ezipụ: Jul-06-2021